Drupal ဆိုတာဘာလဲ။ | MarTech ဘလော့ဂ်
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 2, 2017 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ John အပြာရောင်
မင်းကြည့်နေတာပဲ ဒရူးပယ်လ်? Drupal ကိုသင်ကြားဖူးပါသလား။ Drupal အမှတ်အသားသည်ဤလှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသဖြင့်အလွန်အေးခဲသလော။
Drupal သည်သန်းပေါင်းများစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် application များအားထောက်ပံ့သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိတက်ကြွ။ မတူကွဲပြားသောလူထုများမှတည်ဆောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ Drupal အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤအရင်းအမြစ်များကိုအကြံပြု:
Drupal အတွက် Ultimate လမ်းညွှန်™ - သင့်အား Drupal - အောင်မြင်သောဖြတ်လမ်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြသသည့်အဆင့်ဆင့်ဆင့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာသင်တန်းကို (၆) နှစ်အောက်နှင့်မည်သည့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှမခံရပဲ!
ဗီဒီယိုDrupal ကိုဖန်တီးသူ Dries Buytaert သည်ရှေးဟောင်းမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။Drupal ဆိုတာဘာလဲ“ ဒီဗီတိုတိုသည် developer များ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ အယ်ဒီတာများနှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ Drupal ကိုမည်သို့ချဉ်းကပ်သည်ကိုရှုထောင့်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။ ဒီဗီဒီယိုတိုသည် Dries Buytaert's မှဖြစ်သည် ပြောရမှာ DrupalCon ချီကာဂို, မတ်လ 7, 2011 မှာ။
စာအုပ်: Drupal ကိုအသုံးပြုခြင်း ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအထိဝက်ဘ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုဥပမာများကိုဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာများအများအပြားအသုံးချ လှူဒါန်းခဲ့ module တွေ အဆိုပါ Drupal အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးထားသည်။
Drupal Podcast စီးရီး
အဆိုပါ Drupal အသံ podcast စီးရီးသည်ရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေသောအရာများ၊ အဘယ်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုနေကြောင်းနှင့် module များမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည်ကိုတိုတောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။
အဆိုပါ Lullabot Podcast တခု စီးရီးများသည် Drupal နှင့်ဆိုဒ်များကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်သည်၊ စိတ်ဝင်စားသူများသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကို module ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖန်တီးခြင်းတို့ကိုနက်နက်နဲနဲနက်နက်နဲနဲဖော်ပြသည်။
ထံမှ Drupal ၏သမိုင်းအပေါ်ဤအကြီးအ infographic ထွက်စစ်ဆေးပါ CMS ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ:
Tags: Angela byronCMSbyutaert ခန်းခြောက်Drupaldrupal cmsdrupal Podcast တခုကိုdrupal podcasts တွေကိုdrupal အသံdrupal ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်drupal ၏သမိုင်းlullabot podcastdrupal သုံးပြီး
19:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 02 မှာ
Joomla ကနေထွက်သွားရုံနဲ့တင်မင်းနဲ့ John နဲ့လုံးဝသဘောတူတယ်၊ Drupal ကအကောင်းဆုံးပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အတွက်မည်သို့ဆွေးနွေးရမည်နည်း။ http://www.iconicdigitalmarketing.com